साढे १९ अर्ब घट्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति - Naya Patrika
साढे १९ अर्ब घट्यो लगानीकर्ताको सम्पत्ति
काठमाडौं, २२ फागुन | फागुन २२, २०७४
गत साताको अन्तिम कारोबारदिनदेखि ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक सोमबार पनि ओरालो लागेको छ । सोमबार मात्रै लगानीकर्ताको सम्पत्ति रु. १९ अर्ब ५३ करोड घटेको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको सेयरमूल्यमा आएको निरन्तर गिरावटले लगानीकर्ताको सम्पत्ति घटेर यस दिन रु. १५ खर्ब ७ अर्बमा सीमित भएको छ । अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीले सेयरबजारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक क्षेत्र भनेको समाचारसँगै सेयरबजारमा पहिरो गएको थियो । यस दिन अर्थमन्त्रीले त्यस्तो नभनेको समाचार आउँदा पनि बजार बढ्न भने सकेन । बजारलाई अधिक आपूर्तिले प्रभावित पारिरहेको छ । मागभन्दा बढी आपूर्ति भएपछि बजार घट्नु स्वाभाविक हो । बजारमा माग सिर्जना गर्न सरकार तथा नियामक निकायले बजार विस्तारका कार्यक्रम शीघ्र ल्याउनुपर्ने एक ब्रोकरले बताए । सेयरबजारलाई गति दिन अनलाइन कारोबार सञ्चालनमा ल्याउने, राजधानीमा मात्र केन्द्रित ब्रोकर कम्पनीहरूलाई राजधानी बाहिर शाखा विस्तार गराउने, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने जस्ता कार्य गर्दा बजारमा माग सिर्जना हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
यस दिन नेप्से परिसूचक १६ दशमलव ६९ अंक घटेर १ हजार २ सय ८७ दशमलव ७४ बिन्दुमा पुगेको छ । बजार खुलेसँगै ओरालो लागेको नेप्से, कारोबारको एक घन्टा नबित्दै पुनः ओरालो लागेको थियो । यस दिन कारोबारको अधिकांश समय नेप्से करिब स्थिर देखिएको छ । बजारमा बिक्री चाप बढेपछि नेप्सेको १४ दिने आरएसआई ओभरबट जोनमा पुगेको छ । सोमबार नेप्सेको १४ दिने आरएसआई २२ दशमलव ४३ स्केलमा पुगेको छ । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन ३ दशमलव २४ अंक घटेर २ सय ७३ दशमलव ५६ बिन्दुमा पुगेको छ । यस दिन १ सय ५३ कम्पनीको ५ हजार २ सय ५६ पटकको कारोबारमा रु. ३९ करोड ५२ लाख १७ हजार ४ सय ३५ बराबरको ९ लाख ७७ हजार ४७ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।
कारोबार रकम र कारोबार संख्याका आधारमा यस दिन पनि नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स अगाडि रहेको छ । यस दिन सो कम्पनीको २ सय ३४ पटकको कारोबारमा रु. २ करोड ३६ लाखभन्दा बढीको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको भने यस दिन रु. १ करोड ९५ लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । कारोबार भएको सेयर संख्याका आधारमा भने यस दिन सिभिल बैंक लिमिटेड अगाडि रहेको छ । सो कम्पनीको यस दिन ४५ हजार ५ सय ५३ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । घटेको बजारमा सूर्योदयका लगानीकर्ताले ९ दशमलव ९६ प्रतिशत कमाएका छन् । हिमालयन डिस्टिलरीको सेयरमूल्य यस दिन ९ दशमलव ७४ प्रतिशत घटेको छ । कारोबारमा आएका १ सय ५३ कम्पनीमध्ये २१ कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने १ सय १५ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी १७ कम्पनीको सेयरमूल्य यस दिन स्थिर रहेको छ ।
यस दिन ट्रेडिङ र होटेल समूहको परिसूचकबाहेक अरू सबै समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ । ट्रेडिङ समूहको परिसूचक यस दिन ३ दशमलव ५ प्रतिशत र होटेल समूहको परिसूचक शून्य दशमलव १३ प्रतिशत बढेको छ । माइक्रोफाइनान्स समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ८७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसैगरी,जलविद्युत् समूहको २ दशमलव ८३ प्रतिशत, उत्पादनमूलक समूहको १ दशमलव ९७ प्रतिशत, बिमा समूहको १ दशमलव ८७ प्रतिशत, अन्य समूहको १ दशमलव ४ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ९ प्रतिशत, बैंकिङ समूहको शून्य दशमलव ८६ प्रतिशत र विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत घटेको छ ।
आरम्भको आइपिओ निष्कासन बन्द
आरम्भ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले फागुन १५ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको २ लाख ९४ हजार कित्ता साधारण सेयरमा आवेदन दिने म्याद फागुन २१ गते सकिएको छ । कम्पनीले निष्कासन गरेका सेयरमध्ये ३ प्रतिशत साधारण सेयर कम्पनीको कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । त्यसैगरी, ५ प्रतिशत साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
सिटिजन्स म्युचुअल फन्डको इकाइ बाँडफाँट
सिटिजन्स म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालन हुने सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड–१ ले फागुन २० गते इकाइ बाँडफाँट गरेको छ । यस योजनाले प्रतिइकाइ रु. १० अंक मूल्यका १० करोड इकाइ निष्कासन गरेको थियो । सोमध्ये न्यूनतम १५ प्रतिशत इकाइ सिटिजन्स बैंकलाई सुरक्षित राखी बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाइ बाँडफाँट गरेको हो । यस योजनाको व्यवस्थापक सिबिआइएल क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने कोष प्रवद्र्धक सिटिजन्स बैंक रहेको छ ।
गण्डकीको हकप्रद बाँडफाँट
गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले फागुन २० गते हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको छ । बैंकले मंसिर १४ गतेसम्म कायम साबिक सेयरधनीहरूका लागि चारबराबर एक अनुपातमा ४६ लाख ९ हजार ८ सय १५ दशमलव ५० कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको थियो । सोमध्ये बैंकले ४२ लाख ५६ हजार ९ सय १४ कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँट गरेको हो । बैंकको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आइसिएफसीको बोनस हितग्राही खातामा
आइसिएफसी फाइनान्स लिमिटेडले १० प्रतिशत बोनस सेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरेको छ । कम्पनीले बुक क्लोज मितिसम्ममा अभौतिक सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरूको खातामा सो बोनस सेयर जम्मा गरेको हो । असोज ३१ गते सम्पन्न कम्पनीको साधारणसभाले सो बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । खण्डीकृत रूपमा रहेको बोनस सेयर पूर्ण अंकमा प्राप्त हुने गरी कम्पनीको मुनाफाबाट वितरित ११ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत नगद लाभांशबाट बोनस सेयरमा समायोजन गरी बोनस सेयर वितरण गरेको छ । समायोजन गरिएका सेयरधनीहरूले सोबराबरको रकम कम्पनीलाई बुझाएपश्चात् मात्र बोनस सेयर हितग्राही खातामा जम्मा गरिने कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
काबेलीको बोनस खातामा
काबेली विकास बैंक लिमिटेडले २० प्रतिशत बोनस सेयर डिम्याट खातामा जम्मा गरेको छ । वैशाख २७ गते सम्पन्न बैंकको साधारणसभाबाट सो बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैंकले बुक क्लोज मितिसम्म अभौतिक सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरूको खातामा सो बोनस सेयर जम्मा गरेको हो । कम्पनीको सेयर रजिस्ट्रार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
फुटबल जर्सीमय बजार
सेयर बजार र लगानी
एसइईको नतिजा आज आउने
काल बन्दै टिपर
त्यसपछि खाली खुट्टा डेरा फर्किएँ
डाक्टर कति बिरामी ?
मिलापत्रको २४ घण्टा नबित्दै मिनाको शव भेटियो
‘कहिलेकाहीँ सगरमाथा पनि रिसाउँछ जस्तो लाग्छ ’
क्यान्सरपीडित १० वर्षे छोराको ज्यान बचाउन बाबुको हारगुहार
लैङ्गिक विभेदको विरुद्धमा ‘विदेशीकी स्वास्नी-२’
रवाफ देखाएर हिँडिनँ:कुमार बस्नेत
मेडलिस्टलाई हराएँ : मनिता शाही
हुम्लामा हेलो नेपालको टावर अस्तव्यस्त